Ukukhiqiza okungeziwe: konke odinga ukukwazi mayelana nale nqubo | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
La yokukhiqiza lengetiwe kwesinye isikhathi kudidaniswa nezindlela zokuphrinta ze-3D. Futhi ngukuthi, zingabonakala zifana uma incazelo yaso inakekelwa, noma ukuphrinta kwe-3D uqobo kungathathwa njengenqubo yokwenziwa kokungezelelwa ngokwayo.
Yiba ngangokunokwenzeka, lapha ungaqonda ukufana, umehluko kanye Konke odinga ukukwazi kule ndlela yokwakha izinto ngobukhulu obuthathu ngokungeza ungqimba kuzingqimba zezinto zokwakha.
1 Kuyafana nokuphrinta kwe-3D?
2 Kuyini ukukhiqiza okufakiwe?
3 Yini edingekayo ngenqubo yokukhiqiza?
Kuyafana nokuphrinta kwe-3D?
La Ukuphrinta kwe-3D yandisa amasu wokukhiqiza okungeziwe ekhaya, ngamaphrinta e-3D asekhaya, nakwimboni, lapho kufinyelele ekuguquleni indlela izinto ezazakhiwe ngayo kuze kube manje.
Noma kunjalo, yize ukuphrinta kwe-3D sebenzisa amasu okukhiqiza okwengeza, akuyona yonke into eyenziwayo engabhekwa njengokuphrinta kwe-3D. Yilapho umehluko omkhulu ukhona.
Uma ubheka indlela iphrinta ye-3D esebenza ngayo, uzobona ukuthi ithola imodeli ngefayela elinomfanekiso ozophrintwa. Kusuka kule datha, izohambisa amakhanda ayo iye ku- engeza ungqimba ngendlalelo nokuthi ithatha ivolumu kusuka ku-zero ize ibe nocezu lokugcina.
Okuthile kwehluke kakhulu kwabanye amasiko wendabuko ukwakha izingxenye ze-3D, ezinjengokubumba, ukusikwa, njll., lapho kungakhiwa khona izingxenye zobunzima obulinganiselwe kuphela, kuyilapho kumasu okungezwayo amajometri ayinkimbinkimbi kakhulu angenziwa, kuvule amathuba amasha angenamkhawulo, kusukela ekukhiqizeni kusuka ezingcezwini ezilula, kuye ukwakhiwa kwezindlu kusetshenziswa ukuphrinta kwe-3D ...
Kuyini ukukhiqiza okufakiwe?
La yokukhiqiza lengetiwe Ifaka ubuchwepheshe obuningi, bonke bunokuthile okufana ngakho, futhi lokho ukuthi "kwengezwa" kancane kancane ngenkathi kwenziwa kuze kutholakale umphumela wokugcina. Phakathi kwamasu ahlanganisiwe kukhona:
Ukukhiqizwa okuqondile kwedijithali
Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwalolu hlobo lobuchwepheshe akunamkhawulo. Ekuqaleni bagxile ekubonisweni okusheshayo kwamamodeli wokukhiqiza, futhi muva nje kuyasetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zemikhakha yezimboni, kusuka kwezokwelapha, esikhaleni sezindiza, kwezemfashini, njll.
Umqondo wokukhiqiza owengezayo usetshenziswa ku izindawo eziqeqeshiwe nezikhethekile, kepha njalo kubhekiswa kumasu okwenza izinto ngokungeza ungqimba ngongqimba wezinto ezibonakalayo, ngaphandle kokungena kubuchwepheshe obusetshenziselwa ukwenza kanjalo. Futhi okubalulekile akubalulekile, kungasetshenziswa kusuka kupulasitiki, izindwangu zemvelo, izinsimbi, inhlanganisela, njll.
Yini edingekayo ngenqubo yokukhiqiza?
Ukuze ukwazi yenza inqubo Ekwenzeni okufakiwe, izinto ezilandelayo ziyadingeka:
I-PC okuzokwakhiwa kuyo ingxenye noma imodeli okufanele yenziwe.
Isoftware ye-3D edingekayo, noma i-CAD.
Imishini yokukhiqiza enezele, noma ngabe hlobo luni.
Lapho imodeli ye-3D noma ye-CAD idalwa futhi ithunyelwa ukuthi yenziwe, iqembu lokukhiqiza elengeziwe lizofunda imininingwane edingekayo yokwakheka nokwakheka kwengxenye bese liqala ukungeza izingqimba ezilandelanayo ze- oketshezi, impuphu noma impahla encibilikisiwe ukwakha imodeli.
Lapho kusetshenziswa into encibilikisiwe, ingaqiniswa kabusha, njengoba kunjalo ngepulasitiki evela kumaphrinta e-3D ancibilikiswa kuma-extruders futhi bese kuba lukhuni. Ungasebenzisa futhi uketshezi noma izinhlaka ezibekwa enqubweni yokuphulukisa i-UV, ukunamathisela, njll., Noma impuphu yensimbi bese ihlanganiswa ngokubhaka ...
Isibonelo, zingasetshenziswa kusuka ku-PLA noma i-ABS, kuya kumicu yemvelo, ngensimbi, kukhonkolo, njll. Amathuba maningi.
Izindlela zokukhiqiza ezingeziwe, njengokuphrinta kwe-3D, sezivele zisetshenziswa emikhakheni eminingi. I- izinhlelo zokusebenza zidlula lokho ongakucabanga. Ezinye izibonelo yilezi:
Ukuphrintwa kwenyama ephrintiwe yokudla.
Ukuphrinta kwezitho eziphilayo noma izicubu zomkhakha wezokwelapha.
Izakhiwo nezindlu eziphrintiwe ngokhonkolo.
Ukuncintisana, njengakwi-motorsport ukudala izingxenye ze-aerodynamic nezomshini kuze kube manje akunakwenzeka. Ngisho namaqembu e-F1 akhiphela amaphrinta awo kuthrekhi ukuphrinta izingxenye ezincane ze-aerodynamic.
Ukudalwa kokufakelwa kwezokwelapha noma okufakelwa, njengezakhi zokuhlinzwa, amathambo, amamodeli we-anatomical, njll.
Umkhakha we-Aerospace lapho kwenziwa khona ama-prototypes asebenzayo noma izingxenye ze-aerodynamics yemikhumbi nezindiza.
Imboni yezimoto, ukudala izingxenye zazo zonke izinhlobo.
Ezinye izimboni ezizokhiqizwa kusuka kumathuluzi amasha omsebenzi, ziye kwamanye amamodeli angenakwenziwa izindlela zangaphambilini.
Imfashini, ukukhiqiza ezinye izinto.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Ukukhiqiza okungeziwe: konke odinga ukukwazi mayelana nale nqubo